ကင်ဆာ ထိတောင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက်နာတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်ပံပွင့်
July 17, 2019 Cele Love 0
ကင်ဆာ ထိတောင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက်နာတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်ပံပွင့် အညာဒေသ များမှာ ”လက်ပံပွင့်’ အများ ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အညာဒေသ အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ် …။ ကရင်ပြည်နယ်ဒေသများတွင်”လက်ပံပွင်’အနည်းအများအလိုက်ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ် …။ ကျမတို့ ကရင်ပြည်နယ် ကောကရိတ်မြိုနယ်ကျုံဒိုးမြို့ အမှတ်( […]
ပြန်မပြော နားမထောင် အင်္ဂါ သားသမီးတွေရဲ့ အကြောင်း
ပြန်မပြော နားမထောင် အင်္ဂါ သားသမီးတွေရဲ့ အကြောင်း အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ကြဘူး …။ အရွဲ့ တိုက်တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ယောက် မရှိပါဘူး …။ ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘယ်သူမှ တားမရအောင်ထိ သောင်းကျန်းတတ်ကြတယ် …။ အင်္ဂါသားသမီးများဟာ …. အရမ်း သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြပါတယ် …။ […]
မိဘတွေက ဖုန်း သိမ်းထားလို့ဆိုပြီး ၁၇ထပ်တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ဖြစ်ရပ်
မိဘတွေက ဖုန်း သိမ်းထားလို့ဆိုပြီး ၁၇ထပ်တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ဖြစ်ရပ် ကျောင်းနေအရွယ် ဆယ်ကျောက်သက်ကလေးအများစု ဖုန်းကိုင်တာကို မိဘတွေ အများစုကတော့ မကြိုက်ကြတာများပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အခါ မိဘတွေဘက်က ချော့တစ်လှည့် ခြောက်တစ်လှည့်နဲ့ နည်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီး ပိတ်ပင်တားဆီးကြပါတယ်။ မိဘတွေဘက်က အခုလိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု တွေကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် […]
အပျိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း (သို့) ပေါက်စီ
အပျိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း (သို့) ပေါက်စီ အပျိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း အနုပညာလောကကို တဖန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီး မုန်းစွဲဇာတ်ကားမှ ကြာဥကာရိုက်တာနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ကြိုးကြိုးစားစားဇာတ်ရုပ်နဲ့ လိုက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မအေးသောင်းကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲက ပေးထားတဲ့ အကယ်ဒမီမင်သမီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် …။ လက်ရှိ ပရိတ်သတ်တွေအမြဲစိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေတဲ့ […]
စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကို နောင်တရအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တခုလပ်မလေး…
စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကို နောင်တရအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တခုလပ်မလေး… အခုအချိန်မှာ တခုလပ်ဘဝကို ရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ် ကလေးမိခင် တဦးဟာ သူမကို စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းသည် နောက်တ အကြီး အကျယ် ရေ အာင် ပြန်လည် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူမဟာ နဂို […]
နှစ်ချို့နေတဲ့ အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုး
နှစ်ချို့နေတဲ့ အမာရွတ်ဟောင်းတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုး အမာရွတ်တွေရှိလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ပျော်လိုက်ပါတော့။ နှစ်ချို့နေတဲ့အမာရွတ်တွေ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ၊ ခြေထောက်က အမာရွတ်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမာရွတ်မှန်သမျှကို ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် ….. (၁) သံပုယို ” […]
မွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ မန္တလေးက အထူးကုဆရာဝန်လေး
မွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ မန္တလေးက အထူးကုဆရာဝန်လေး မွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ မန္တလေးက အလှအပဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်လေး အောင်သီဟရဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်လေးဟာ ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး ဖိုတိုမော်ဒယ်အလုပ်ကိုလည်း ဝါသနာ အရလုပ်ကိုင်လေ့ […]
ဒီစကား (၅) ခွန်း သင့်ချစ်သူရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ …
ဒီစကား (၅) ခွန်း သင့်ချစ်သူရဲ့ ပါးစပ်ကထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ … (၁) အပိုတွေ လုပ်ပြန်ပြီ ယောက်ျား တယောက်၊ ချစ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဒီလို မစော်ကားသင့် ပါဘူး။ သင်ဟာ ရက်တွေဆက်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ သူ့ဖက်က […]
အသားအရေပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနည်းများ
အသားအရေပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနည်းများ ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟာ အလှအပအတွက်သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို အသားအရေအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပြီး နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပေးရင် အသားအရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြသနာတွေကိုအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် နော် …. (၁) ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေအတွက် ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ […]
ဖြုံဘူး ရွာသားတွေနဲ့အတူ ခြင်းခတ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဒေါင်းနဲ့ထူးအောင် (Video)
ဖြုံဘူး ရွာသားတွေနဲ့အတူ ခြင်းခတ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ဒေါင်းနဲ့ထူးအောင် (Video) မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ ဒေါင်းနဲ့ ထူးအောင်တို့ကတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် ဖြုံဘူးရွာကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ “ဝတ်လဲတော်ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ကြတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ […]